Filtrer les éléments par date : lundi, 02 mars 2020
lundi, 02 mars 2020 22:38
Coronavirus: Mikoropaka ny any Sénégal
Manao ombay mitady ny any Sénégal ; antsoina avokoa ireo mpandeha tamin’ny fiaramanidina sidina HC404 an’ny kaompania Air Sénégal, avy any Paris niazo an’i Dakar, tamin’ny sabotsy 29 febroary 2020 hanatona avy hatrany ny Institut Pasteur Dakar hanao fitiliana. Raha ny fanazavana dia nisy teratany frantsay iray, isan’ny mpandeha tao, voan’ny coronavirus.
Aza lany andro mandeha dokotera na koa farmasia fa manatona avy hatrany ny Institut Pasteur ao Dakar hoy hatrany ny fanentanana totoafo.
lundi, 02 mars 2020 22:37
HVM Foibe Nasionaly: Mangataka ny hanokafana fanadihadiana mikasika « permis » sy ny « carte grise biométrique » sandoka
Mangataka ny fitondram-panjakana ny HVM Foibe Nasionaly hanokatra ny fanadihadiana hentitra mikasika ny « permis » sy ny « carte grise biométrique » sandoka ary hampahafantatra ny valin'izany fanadihadiana izany amin'ny rehetra.
lundi, 02 mars 2020 15:43
Rodobe ho an'ny fahasalamana sy ny zon'ny vehivavy: Nitohy androany taty Vinaninkarena ny hetsika
Mitohy ny Rodobe ho an'ny fahasalamana sy ny zon'ny vehivavy. Hetsika natao ho fanomanana ny Andro Maneran-tany ho an'ny Vehivavy.
Taty amin'ny Kaominina Vinaninkarena, Distrika Antsirabe II, Faritra Vakinankaratra no natao ny hetsika androany 2 martsa 2020.
Nizara lay hoan'ireo vehivavy lehibe sy mitaiza kely ny Ministeran'ny Mponina, ary nanao fanentanana mahakasika ny ady amin'ny herisetra sy ny zon'ny vehivavy ary ny miralenta. Nisy ihany koa ny fizaham-pahasalamana sy ny toro-hevitra momba ny fahasalamana, ary ny fitiliana ny homamiadan'ny nono, ny vozon'ny tranon-jaza,ny diabeta, ny VIH-SIDA ary ny tazomoka.
lundi, 02 mars 2020 15:37
EPP eto Antananarivo Renivohitra: Hifanome tanana amin'ny fampandehanana azy ny Ministera sy ny Kaominina
Hiara-hiasa ny Ministeran’ny Fanabeazam-Pirenena, ny Fampianarana ara-Teknika sy arak’Asa andaniny, sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ankilany, amin’ny fikolokoloana ny tranon-tsekoly sy ny fampisakafoanana ireo mpianatra ary ny fandraisana an-tanana ny fanakaramana ireo mpiambina eny amin’ny EPP miisa manodidina ny 90 eto anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.
Nivoitra io androany nandritra ny ny fifampiresahana teo amin'ny Ben'ny tanàna Naina Andriantsitohaina sy ny Minisitra Andriamanana Josoa Rijasoa Iarintsambatra tao amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely.
Heverina hatomboka amin’ny taom-pianarana manaraka ny fiaraha-miasa. Tanjona ny hahatonga ireo sehatra ireo ho ara-dalàna sy haharitra.
lundi, 02 mars 2020 15:35
Morondava: Misy traboina mitaraina ho tsy nahazo fanampiana
Izahay traboina noho ny ranobe vokatry ny fahavakisan'ny fefiloha iray ao Ankabatomena nifanojo tamin’ny fiakaran’ny ranomasina nefa tsy nahazo fanampiana nandritra ny fizarana natao, hoy ny fitarainan’i Basile ao Antanambao.
Nantsoina izahay traboina nitoby teny amin’ny toerana nametrahana anay tamin’ny fotoana nahadibodrano ny tanàna fa hisy fizarana vary, nefa tsy nahazo nony tonga. Ny mahagaga sady mampalahelo ka mampitaraina anay, hoy hatrany i Basile, dia nisy olona tsy traboina nahazo vary.
lundi, 02 mars 2020 15:33
« Subventions des enseignants »: Mpampianatra amin’ny sekoly tsy miankina maherin’ny 34 500 no hisitraka
Mpampianatra amin’ny sekoly tsy miankina maherin’ny 34 500 manerana ireo Faritra 22 no hisitraka fanampiana ara-bola na « subventions des enseignants », ary sekoly tsy miankina miisa 1 670 no ahazo ny « Allègement des charges parentales » na fanamaivanana ny vesatr’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra ho an’ireo sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana.
Anisany masontsivana napetraka ahafahan’ireo sekoly tsy miankina misitraka ireo fanampiana ireo ny fananana saram-pianarana latsaky ny 800 Ar, ny fananan’ny mpampianatra fahazoandalana hampianatra (Attestation d’Enseigner), ny fananan’ny sekoly fahazoandalana hisokatra (Attestation d’Ouverture).
Natomboka tamin’ny fomba ofisialy androany ny fizarana ny taratasim-bola ho an’ny faritra Analamanga ary hitohy manerana ny nosy izany.
(Loharanom-baovao: Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, ny Fampianarana ara-Teknika sy arak'Asa)
lundi, 02 mars 2020 15:32
Talohan'ny taonjato niainan'i Jesoa Kristy dia efa nisy ny Hetra. Vola na vokatra nalain'ny mpanjaka na ny fanjakana (Etat) (ny fanjakana dia misy teny fototra hoe mpanjaka), amin'ireo olona eo ambany fiadidiany ampandehanana sy hizaka ny fandanian'ny mpanjaka na ny fanjakana.
Ny mpanjaka na ny fanjakana, mba hampihorina azy dia misy asa ataony ho an'ny fiaraha-monina, fotodrafitrasa, fiarovana...ka dia ampiasainy izay Hetra izay.
Taty aoriana, andron'ny Antiquité, dia nasiana Hetra ihany koa ireo vokatra avoaka ivelan'ny fanjakana, hiarovana ny tsy fahampian-tsakafo na vokatra ho anin'ny olona ao anaty fanjakana. (Droit de sortie assis sur les biens).